बिशेषज्ञको सुझाब, बच्चालाई पिसाबको संक्रमणबाट यसरी बचाउनुस् (भिडियो सहित) - Ankuran Khabar
२०७६ फाल्गुन १८0
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम र सहजै वातवरणमा समायोजन हुन गाह्रो पर्ने भएकाले पनि बच्चाको उमेरलाई संवेदनशील र जटिल उमेरावस्था भनिन्छ । अभिभावकले गर्ने थोरै लाप्रवाहीले पनि बच्चा गम्भीर प्रकृतिका रोगको शिकार हुने गर्दछन । बच्चामा धेरै देखिने समस्या मध्ये एक हो, पिसाबको संक्रमण । बच्चामा पिसाबको संक्रमण हुने कारण ? यसका लक्षण ? र बच्ने उपायबारे ईशान बाल तथा महिला अस्पतालका निर्देशक तथा वरिष्ठ बाल सल्यचिकित्सक डा.आर.पि. चौधरी यसो भन्छन् …
पिसाबमा संक्रमण भनेको के हो ?
सामान्यतया पिसाब बनाउने, भण्डारण गर्ने तथा शरीरबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्ने जुनसुकै अंगमा भएको संक्रमणलाई पिसाब संक्रमण भनिन्छ । यसलाई सामान्य भाषामा युटिआई भनिन्छ । बालकको तुलनामा बालिकामा पिसाबको संक्रमण हुने दर बढी पाइन्छ ।
बच्चाको पिसाब संक्रमण हुने कारणहरु के के हुन् ?
बच्चाहरुमा धेरै र पटक पटक देखिने समस्यामध्ये एक पिसाबको संक्रमण पनि हो । पिसाबमा संक्रमण हुने कारण धेरै छन् । विशेषतः ई–कोलाई नामक कीटाणुका कारण पिसाबमा संक्रमण हुन्छ । यसको साथै बालिकाको दिसा धुँदा हात पछाडीबाट अगाडी लानु ।
२.बालकको लिंगको टुप्पोको मासु पछाडी फर्कीएको हुनु ।
३.सरसफाईमा ध्यान नदिनु ।
४.पुरुष या महिलाको जस्तो स्पष्ट लिंग नछुटिनु ।
मिर्गौला, मूत्रवाहिनी, मूत्रथैली तथा मूत्रनलीमा समस्या वा विकृति हुँदा समेत पिसाबको संक्रमण हुन सक्छ ।
पिसाबमा संक्रमण हुँदा के कस्ता लक्षण देखिन्छन ?
पिसावमा संक्रमण हुँदा संक्रमण भएको समय र बच्चाको उमरावस्थाअनुसार लक्षण फरक पर्न सक्छ ।
१ सानो बच्चाहरु मडारिएर रुने ।
२ पिसाब पोल्नु,छिटो–छिटो पिसाब फेर्नु
४.पिसाब नियन्त्रण गर्न नसक्नु ।
५. ज्वारो आउँनु ।
६.पेटमा डल्लाडुल्ली देखिनु,तल्लो पेट र कम्मर दुख्नु ।
७.पिसाबबाट गन्ध आउनु ।
८.वान्ता हुनु ।
संक्रमण भएको लामो समय भए पिसाबमा रगत देखिनु आदि ।
के बच्चाको पिसाबमा संक्रमण हुँनु गम्भीर रोगको लक्षण हो ?
पिसाबमा संक्रमण हुँने वित्तिकै मृगौला लगाएतका अंगमा गम्भीर रोग लागि हाल्छ भन्ने हैन् । तर संक्रमणको बेलैमा उपचार गरिएन भने यसले मृगौला फेल हुनेसम्मको अवस्था ल्याउँछ । उपचार गर्न जति ढिला भयो त्यति संक्रमण मूत्रवाहिनी हुँदै मिर्गौला तर्फ जाने गर्छ । मिर्गौला र मूत्रवाहिनीको संक्रमण हुनु भनेको जटिल स्थिति हो । यसको वेलैमा उपचार नगरिए मिर्गौला फेल हुनेदेखि लिएर अन्य अंगमा असर गरि बच्चाको मृत्यु समेत हुने गर्दछ ।
बच्चाको पिसाबमा संक्रमण देखिए उपचार पद्धति कस्तो छ ?
माथिका लक्षण बच्चामा देखापरेमा अभिभावकले बच्चालाई वेलैमा युरोलोजिस्ट चिकित्सककोमा परीक्षण गराउनु पर्छ । बच्चालाई आवश्यक जाँच गरी चिकित्सकले पिसाबको नमुना प्रयोगशालामा पठाउँछन् । विशेषगरी, प्रयोगशालामा पिसाबको सामान्य तथा माइक्रोस्कोपिक जाँच र कल्चर गरिन्छ । यसरी गरिएको जाँचबाट पिसाबमा वास्तविक संक्रमणको स्थिति देखिन्छ । त्यस पछि आवश्यक्ता अनुसार उपयुक्त एन्टिबायोटिकको सेन्सिटिभिटी पनि चेक गरिन्छ । पटक–पटक संक्रमण भइराख्ने बच्चाको मूत्र प्रणालीमा पिसाब उल्टो फर्किने समस्या हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । यस्तो अवस्थाको सही निदान गर्न एउटा विशेष किसिमको एक्स–रे जाँच गरिन्छ, जसलाई मिक्चुरेटिङ सिस्टोयुरेथ्रोग्राम भनिन्छ । यस्ता परीक्षणबाट आएको रिपोट अनुसार औषधिबाट या सल्यक्रिया के आवश्यक हो, सो गरिन्छ ।
बच्चालाई पिसाबको संक्रमणबाट बचाउन के गर्ने ?
सबै भन्दा राम्रो त संक्रमण हुनै नदिनु हो । तर यदि संक्रमण भैहाल्यो भने पनि माथिका कु्नै पनि लक्षण देखिना साथ विशेषज्ञकोमा परीक्षण गराइहाल्नु पर्छ । सुरुमै यसलाई निराकरण गर्न सकियो भने, यो सामान्य कुरा हो ।
१.सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने ।
२.पिसाब रोकेर राख्न नलगाउने ।
३.प्रत्येकपटक दिशा, पिसाब गरेपछि मूत्र प्रणालीको बाहिरी अंग सानो बच्चा भए अभिभावकले र बच्चा आफै गर्न सक्ने भए राम्ररी सफा गर्न लगाउने ।
४.जबर्जस्ती पिसाब रोकेर बस्ने बानी गराउँनु हुदैन् ।
५.प्रशस्त मात्रामा शुद्ध पानी पिउँन लगाउने ।
६.सानो बच्चामा पिसाब नगरे पनि छिटो छिटो डाइपर परिवर्तन गरिदिने ।
काभ्रेबाट लागूऔषध सहित एक युवती पक्राउ
एसीसी इस्टर्न रिजन टी–ट्वान्टीः नेपालको लगातार दोस्रो हार